27/06/2022 - 20:43:49 Wararka Gudaha MeMO Staff
Munaasabad si heersare loo soo agaasimay oo lagu daahfurayey isbitaal weyn oo laga hirgeliyey degmada jilib ayaa lagu qabtay gudaha degmadaasi, taas oo ay kasoo qeybgaleen mas'uuliyiin kala duwan.
27/06/2022 - 13:28:12 Wararka Gudaha MeMO Staff
Melleteriga Itoobiya ayaa xukun daldalaad ah ku fuliyay maxaabiis katirsanaa ciidanka Suudaan oo ay ku qabteen dagaallo dhowaan ka dhaca deegaannada xuduudda ku teedsan.
27/06/2022 - 13:14:07 Wararka Gudaha MeMO Staff
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qarax culus oo deegaan katirsan gobolka Hiiraan lagula beegsaday mas'uul sare oo katirsan dowladda Federaalka.
27/06/2022 - 09:39:19 Wararka Gudaha MeMO Staff
Dowladda Koonfur Afrika ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixisay meydad labaatameeyo ah oo laga helay mid kamida degmooyinka wadankaasi.
27/06/2022 - 08:38:48 Wararka Gudaha MeMO Staff
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in weeraro culus oo khasaara dhaliyay lagu beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad katirsan maamulka 'Jubbaland'.
Jarmal Dooni Maayee, Jilib Yaa i Geeya!..... W/Q: Aweys Manaane
26/06/2022 - 22:19:09 Wararka Gudaha MeMO Staff
Waxaa labadii Isbuuc ee lasoo dhaafay warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshadu ku xiriirto qabsaday warbixin laga sii daayay Talefishinka laga leeyahay wadanka Ingiriiska ee Channel 4, warbixintaas oo uu diyaariyay wariyaha Soomaaliga ah ee Jamaal Muxumad Cismaan.
Maxkamadda sare ee Mareykanka oo laashay qaanuunkii dumarka u ogolaanay in ay ilmaha iskasoo ridaan.
26/06/2022 - 17:37:11 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
"America 50 sano ayay dib ulaabatay" waxaa sidaas lagusoo qoray ciwaannada wargeysyada ugu caansan dalka Mareykanka saacado kadib markii ay maxkamadda sare ee wadankaas ay mamnuucday in dumarku ilmaha iskasoo ridi karaan.
26/06/2022 - 13:58:57 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Xilli abaaro iyo jiilaal lagasoo warinayo qaar badan oo katirsan gobollada Soomaaliya ayay xaalad taas ka duwan ka jirtaa deegaanno katirsan gobolka Jubbada dhexe.
26/06/2022 - 13:23:36 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Khasaara culus ayaa ka dhashay weerar hubaysan oo lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen kooxo sameeya wax lamid ah falalkii qowmuluud.
26/06/2022 - 13:07:30 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Xoogag jihaadi ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro ku qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka DF-ka ku leeyihiin gobollo dhaca Koonfurta Soomaaliya.
26/06/2022 - 12:13:21 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha DF, Xassan Sheekh Maxamuud oo laga helay cudurka Covid19 ayaa karaantiil ama go'doomin isku sameeyay, tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo uu muddo 6 cisho ah uga maqnaa safar dhanka dibadda ah.
25/06/2022 - 13:22:09 Wararka Gudaha MeMO Staff
Dowladda Maraykanka ayaa xabsiga Guwatananmo waxay kasii deysay maxbuus muslim ah oo kasoo jeeda dalka Afqaanistaan, kaasoo 20kii sano ee lasoo dhaafay ku xirnaa xabsigaas sumcadda xun, ee lagu tacdiibyo maxaabiista muslimiinta.
Baarlamaanka oo codka kalsoonida siiyay R/wasaare Hamza.
25/06/2022 - 12:38:45 Wararka Gudaha MeMO Staff
Kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaannada baarlamaanka DF-ka ayay ku ogolaadeen R/wasaaranimada Xamza Cabdi Barre.
25/06/2022 - 11:58:13 Wararka Gudaha MeMO Staff
Markii ugu horraysay maamulka isku magacaabay Puntland ayaa ka hadlay guuldarradii siyaasadeed ee Saciid Deni kasoo gaartay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya.
25/06/2022 - 11:53:37 Wararka Gudaha MeMO Staff
Dowladda Federaalka ayaa si kulul ubeenisay warar maalmahan laysla dhaxmarayay oo sheegayay in madaxweyne Xasan Sheekh uu booqasho qarsoodi ah ku tagay maamulka Yahuudda.
25/06/2022 - 11:08:12 Wararka Gudaha MeMO Staff
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan gobollada dalka uga dhacay iska hor'imaadyo dhaxmaray Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka dowladda.
25/06/2022 - 08:38:11 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar arbushaad ah oo ciidamo huwan ah ay ka geysteen deegaanno gobolka Jubbada hoose.
25/06/2022 - 07:08:58 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Federaalka ayaa lagu sheegay in caabuqa Covid19 uu soo ritay Xasan Sheekh Maxamuud oo maalin ka hor kasoo laabtay safar dibadda ah.
Daawo sida ciidanka Gorgor loogu gummaaday Sh/dhexe [FILIM CUSUB].
23/06/2022 - 20:45:43 Wararka Gudaha MeMO Staff
Garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa baahisay muuqaal la daawan karo muddo 45 daqiiqo oo ay kusoo bandhigeyso cududeeda military iyo awoodda ay ku leedahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, ilaa gudaha Kenya.
23/06/2022 - 17:52:51 Wararka Gudaha MeMO Staff
Maamulka isku magacaabay Puntland aya wali sii wada xadgudubyada uu ugeysanayo dadka shacabka ah ee kudhaqan dhulalka uu ka arimiyo maamulkan ee waqooyi Bari Soomaaliya.